UZola uchitha izinsolo zikasomabhizinisi | News24
UZola uchitha izinsolo zikasomabhizinisi
Johannesburg - Usomabhizinisi waseGoli ucasulwe yisenzo athi senziwe uZola, uBonginkosi Dlamini, njengoba ethi lesi sihlabani sikamabonakude sidayise inja yakhe ukuze sizokwazi ukuthola imali yokuthenga ubhiya.
UGift Mphokane utshele iphephandaba iSowetan ngoMsombuluko ukuthi waboleka uZola inja, ayibiza ngoJozi ukuthi izohlala nekaZola, uGusheshe.
Lo somabhizinisi uthi uZola udayise inja yakhe, kanti kudingeke ukuba yena abe esethenga enye efana nayo ngo-R8 000.
UMphokane utshele iphephandaba ukuthi: “Mina bengazi ukuthi inja ikuyena ngoba senza isivumelwano.”
Funda nalolu daba: 'Zibanga intombi izihlabani zebhola'
“Kodwa ngitshelwe ukuthi wahamba nenja yami wayoyidayisa ukuze ezothola ubhiya,” kusho uMphokane, oqhube ngokuthi “Ngiye e-studio sakhe nokuyilapho ngifike ngatshelwa khona ukuthi ngempela uyidayisile.”
UZola kodwa uyakuphika yena lokhu: “Ngafonela abakwa-SPCA ezinyangeni ezintathu ezedlule ngabatshela ukuthi abazolanda leli dimoni emzini wami.”
UZola uthi inja wayihambisa e-SPCA ngoba yayidla ukudla kwenja yakhe, okubizayo.